Warbaahinta Bulshoweyn oo sawiro cusub kasoo qaaday goobihii ay saakay qaraxyada ka dhaceen (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Warbaahinta Bulshoweyn oo sawiro cusub kasoo qaaday goobihii ay saakay qaraxyada ka dhaceen (SAWIRO)
Waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay laba qarax oo abaarihii 9.00am ee maanta ka dhacay afaafka hore ee xarunta taliska AMISOM ee Xalane (Madina Gate) iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Warbaahinta Bulshoweyn oo saakay booqatay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa heshay sawiro badan oo muujinaaya burburka xoogan oo ay qaraxyadii saakay ka geysteen magaalada Muqdisho.
Qaraxyadaasi oo ahaa laba qarax ayaa mid ka mid ah waxaa lagu weeraray albaabka hore ee xarunta AMISOM, iyadoona ay halkaasi ka dhasheen qasaare xoogan.
Qaraxii labaad ayaa sidoo kale lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan hay’adda Qaramada Midoobay (UN), oo ku dhex taala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Saraakiil u kala hadashay UN-ka iyo AMISOM ayaa beeniyay inay qasaaro kasoo gaartay qaraxyadii saakay gil-gilay magaalada Muqdisho.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa dhooban ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo AMISOM, iyadoona muuqaalada aynu kasoo qaadnay ay muujinayaan bur-bur xoogan oo ay qaraxyadaasi geysteen.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay inay qaraxyadaasi ka dambeeyeen, iyagoona ku faanay inay dileen ilaa 27 askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo saraakiil ka tirsan hay’adda Qaramada Midoobay ee UN.
Dhinaca kale, wariyeyaasha warbaahinta Bulshoweyn oo goobta ay qaraxyadu ka dhaceen booqday ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ilaalo u ahaa saraakiil ka tirsan UN-ka iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo dad shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxa ka dhacay agagaarka Irida ciidamada AMISOM oo ay ka galaan garoonka ee Madiina Gate.
Qaraxyadaan, ayaa sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyay dhismayaal ka tirsan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta loo yaqaanno VIP-da ee martidu ay ku nastaan iyo qeybo kale oo ka tirsan garoonka.
FBI clears Hillary Clinton of criminal offense in emails saga
Somali FM Hopes Turkish Overseas Military Camp to Boost Country’s Army